५४ अंकले परिसूचकमा वृद्धि, एनसीसी बैंकको सर्वाधिक कारोबार
वैशाख १९, काठमाडौं । आइतवार नेप्से परिसूचक ५४ अंकले बढेर २ हजार ६६५ दशमलव ११ विन्दुमा पुगेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत बढेको हो । २ हजार ६२७ दशमलव ८२ विन्दुदेखि खुलेको बजार २ हजार ६११ विन्दुसम्म झरेको थियो ।
यसदिन कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचक बढ्दा अन्य समूहको परिसूचक सर्वाधिक ४ दशमलव ६३ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यस्तै बैंकिङ्गको १ दशमलव १२ प्रतिशत, व्यापारिकको २ दशमलव ११ प्रतिशत, होटल्स तथा पर्यटन समूहको ३ दशमलव ३८ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव ३५ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव ४७ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
त्यसैगरी वित्तको १ दशमलव ३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ४७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको २ दशमलव ६३ प्रतिशत, लघुवित्तको २ प्रतिशत, जीवन बीमाको ३ दशमलव ७४ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
आइतवार तीन ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढेको छ । विशाल बजार कम्पनी र महिला लघुवित्तको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत र सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत शेयरमूल्य बढेको हो ।
यसदिन विशाल बजार कम्पनीको प्रतिशेयर रू. ५०९ ले बढेर अन्तिम रू. ५ हजार ६०८ र महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. ३१२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३ हजार ४३७ कायम भएको छ । सिंगटी हाइड्रोको भने प्रतिकित्ता रू. ३६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३९९ पुगेको छ ।
यसदिन रू. ७ अर्ब ३६ करोड ८ लाख बराबरको १ करोड ५८ लाख ३२ हजार ४०३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यो दिन २२६ ओटा कम्पनीको ८३ हजार ४०४ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
कुल कारोबारमा एनसीसी बैंकको सर्वाधिक हिस्सा रहेको छ । एनसीसी बैंकको रू. ४२ करोड २ लाख ४३ हजार बराबरको ११ लाख ४५ हजार ७५३ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको दिन उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३६७ पुगेको छ ।